Lolaa fi olola ABO fi WBO irraatti bifa kamiinu oofamu of-irraa ittisuun dirqama Oromummaati – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLolaa fi olola ABO fi WBO irraatti bifa kamiinu oofamu of-irraa ittisuun dirqama Oromummaati
Lolaa fi olola ABO fi WBO irraatti bifa kamiinu oofamu of-irraa ittisuun dirqama Oromummaati!
Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa OBN irratti haasa’uu isaanii dhaga’ee. Na hin dinqine! Namoota kana bara 2006 keessa Oslootti qaamaan argeera. Ejjennaa isaaniis waltajjii marii sana irratti hubadheera. ’Dhugaan dhala ofii caalaa nama mararti’ waan ta’eef haqa jirtu isiniif hima.
1990ta keessa obbo Leencoo gara Kenya sana booda Kanadaa keessa jiraataa turan. Bara 2005 sochiin ijoolleen Oromoo FDG gaggeessuun QBOtti ija agrsiisuu eegalan. Yeroo sanatti bu’aa qabsoo irraa argame haammachuuf Malles waliin wal haasa’anii bakka itti argachuuf hawwuun gara Oslo tti imaluun ni ture. Bara 2006 keessa akka ABOn hidhatnoo hiikkatee EPRDFtti dabalamu Malles Zenawi waliin wal ta’uun, dirqama kana raawwachuuf sababaa hedduu tarreessuun miseensota ABO fudhachiisuuf tattaafatan, fknf. Rakkoo geo-politics, globalization, siyaasa lammummaa fi kkf. Sababooti tarrifaman kun hunduu gad jedhanii Wayyaanee waliin araaramuuf ture. ‘Wayyaaneen jabduu dha, ishee lollee injifachuu hin dandeenyu’ jedhu ture. Miseensoti ABOs murtiin laafina irraa ka’een Malles waliin araaramuun harka kennachuu waan ta’eef hin fudhannu! Wayyaanee injifachuu dandeenya! Jennee didne. Diddaan sun guddoo isaan aarse.
Hawwiin Mallasaa waliin araaramuu itti fufee bara 2008 keessaa maqaa ‘jijjiirama’ jedhuun, garee Kamaal Galchuu waliin wal ta’anii mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo(QBO) jeeqan. Qabeenya ABO biyya alaa saamisan, WBO dirree kibbaa fi kibba bahaa diigan, Lichoo Bukuraas gansiisan. Ilmaan Oromoo QBOf murteessoo ta’an bakka jiranitti akka adamfamani tarkaanfiin irratti fudhatamu keessaa fi alaan shira dalagan, Wayyaaneetti dabarsaniis kennan. Yeroof sochiin FDG qabbanaawe.
Mallesis mooraan QBO laafteef, Leencoo faas dagate. Isinu hin jirtan jedhen. Bara 2012 Mallasaanis du’e. Leencoon faa gara wallaalan. Waa’ila shiraa dhaban. Warri maqaa ‘jijjiiramaan’ ABO keessaa bahan bakka hedduutti caccaban. Kamaal fi Leencoon wal duraa duubaan G7 waliin wal ta’an. Waa’ee Oromoos dagatanii waa’ee Itophiyaa lallaban.
ABO ijoollee Oromoo FDG keessaa qooda qabaachaa turan bifa haaraan maqaa ‘Qeerroo Bilisummaa Oromoo’ jedhuun bara 2011 keessa qajeelche. FXG baruma baraan jabaataa deeme. Oromoon du’a sodaachuu dhiisee tokkummaan qabsoo finiinse. Wayyaaneen Oromoo lolaan akka injifachuu hin dandeenye amantee, fudhate. Leencoo faa EPRDF gorsan. EPRDFs gorsa isaanii dhaga’uun, Oromoo Oromoon cabsuuf toftaa baafatte. EPRDFs muummicha ministeraa (Dr. Abiy) fi nama sabboonaa fakkaatee gaaffii Oromoo dubbatu (Lammaa Magarsaa) OPDO keessaa akka muudu irratti harka wayyabaan walii gale, muude. Bara 2018 keessa TPLF aangoo OPDOtti waan dabarsitee fakkaatte. Gara Maqaleetti waan galan of-fakkeessan. MM haarayaan jaalalaa fi dhiifama lallabe. Hidhamtoota siyaasaa hidhaatii yaase. Dirree siyaasaas kan bane fakkaate. ABO fi WBO gara Oromiyaatti walii galtee mootummaa EPRDFn seenan. Qeerroon diddaa isaa qabbaneesse.
Dabballooti OPDO/ODP kanneen akka ATM ABO irratti olola jabeessan. WBO haa hiikkatu jedhan. WBOn Ertiraa irraa dhufef kabajaan maluuf dhorkan. ABO irrattis ololli daboodhaan gaggeeffamuun itti fufe. Obbo Leencoo fi Dr. Diimaa hundi isaaniiyyu OPDO/ODP/EPRDF abukaatoo dhaabbachuuf daboo bahan. Hojii ololaa media EPRDF irratti bahanii gaggeessuu filannoo isaanii ta’e. Sammuun moohamaa ofii hojjedhee nan injifadha hin jenne, mooraa halagaaf dalaguu itti fufe. Yeroo duraa Malles (EPRDF) deeggaraa fi ergamaa turan, Malles duunaan Birihanu Negga (G7) waliin turan, amma ammoo Dr. Abiy (EPRDF) deeggaranii ABO irratti duulaa jiru.
Namooti kun QBO keessatti gatii baasuu malu, rifeensa lamas biqilchanii jiru. Silaa, daandii haqaa irra jiraatan kabajaa guddaa qabu. Dirqama ABO diiguu ofitti fudhatanii bara dheeraa yaalanii dadhaban. Dhaaba ODF jedhamus dhaabbatan. Amma sana diiganii OPDO/ODPtti makaman. Dhaaba tokko irraa dhaaba biraatti utaalaa jiru. Har’a dhimma ABO fi WBO irraa haasa’uun Oromoo gowwomsuu hin danda’an. Oromoon hubannaa fi dammaqiinsa jabaa horateera. ABO diiguun humna Oromoo diiguu akka ta’es qixeessee beeka. Wayyaaneenu itti hin milkoofne. Kana booda humni kamuu Oromoo diiguu hin danda’u! ABO fi Oromoon nama dhuunfaa aangessuuf hin qabsoofne! Akeeki Oromoo sadarkaa hundaatti aangessuu ammallee hin guutamne! Leencoo fi Diimaan akka Oromoon mootummaa federaalaa fi mootummaa Orommiyaa guutuutti dhuunfateetti haasa’uun dogoggora. ABO fi WBO dura dhaabbachuun uummata Oromoo dura dhaabbachuu dha! ABO fi WBO irratti ololuun uummata Oromoo irratti ololuu dha! ABO fi WBO xiqqeessuuf yaaluun uummata Oromoo xiqqeessuuf yaaluu dha! Oromoon Jaarrolii ODF kan amma OPDO/ODP ta’an dhimma ABO fi WBO maaliifu haasa’u?! Yakka har’a EPRDF uummata Oromoo irratti dalagaa jiru maaliif dhoksu?! Kan uummata Oromoo goolaa fi ajjeesaa jiru EPRDF dha! Sababaa isaan EPRDF waliin wal ta’aniif, yakka EPRDF Oromoo hidhuu fi ajjeesuu dubbachuu hanqachuun haqa Oromoon qabu awwaaluu dha. Jaarsoliin keessa ABO fi WBO kan beekan fakkaatanii olola fakkaataa gaggeessuu irraa akka of qusatanii fi dhugaa Oromoo dubbatan otoo gorfamanii gaarii dha.
Ejjennaa fi akeeki ABO ifaa dha, innis mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo fiixa baasuun, Oromoo bilisoomsuu, walaboomsuu fi iggitii itti tolchuu dha! Uummata Oromoo guddeessas sadarkaa hundaatti aangessuun dantaa Oromoo haala kamuu keessatti tiksuu dha.
Akeeki ABO akeeka uummata Oromoo dha! Waan ta’eef, Oromoon ABO fi WBO akka qaroo ija isaatti ilaaluun lolaa fi olola bifa kamiinu irraatti baname bifa kamiinuu irraa ittisuun dirqama! ABOn qabeenyaa qaalii uummata Oromooti! Oromoon gatii guddaa fi lubbuu itti baaseera! Mararfata! Injifannoon kana dura argames ta’e injifannoon of dura argamuuf deemu kan uummata Oromooti! Walumaa galatti dhimmi ABO fi WBO dhimma uummata Oromooti! Yaa Oromoo ABO fi WBO humneessaa! ABO fi WBO humneessuun uummata Oromoo humneessuu dha!
ODP clearly saw a threat from OLF. They know they have no chance against it in free and fair election. – https://t.co/3wMGMVHNEz pic.twitter.com/InRgiUl3rX
Ummanni keenya warri jimmaa Galata qabdu ulfaadhaa keennaa bareedaa obboleessa keenya Jawaar Mohamediif kennaa seenaa qabeessadha
Guyyaa har’aa konkolaataan imaltoota qabatee socho’aa ture naannoo shaambuutti kufuudhaan lubbuun namoota hedduu galaafatameera..daandii shaambuu kun rakkoo mootummaa irraan kan ka’e uummata gaaga’aa akka jiru yeroo hedduu hawaasni iyyataa akka jirus himameera…why